Hery Rajaonarimampianina : Hanampy sy hifanolo tanana amin’ireo ary aman-drenin’ny mpianatra -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Hanampy sy hifanolo tanana amin’ireo ary aman-drenin’ny mpianatra
Tanjona ny hanala ny fahasahiranan’ireo ray aman-dreny izay efa miantoka ny zanany mandavan-taonoa, na eo amin’ny sakafo andavanandro io, na ihany koa ny saran-dalana sy ny tsindry vavony ho an’ ireo mpianatra amin’ny CEG sy ny EPP eto Antananarivo, antony naharesy lahatra ny filoham-pirenena hanatanteraka ny hetsika fizarana kits scolaires, na fitaovam-pianarana ho an’ ny mpianatra ny alarobia ho avy izao etsy amin’ny coliseum. Mpianatra hatrany amin’ny 63 000 no hahazo tombony amin’ireo EPP manerana an’Antananarivo, izany hoe hahazo ny anjarany ihany koa ireo EPP izay any amin’ny faritra Antsimondrano sy Avaradrano ary ambohidratrimo. Ireo mpianatry ny CEG miisa 15 eto Antananarivo renivohitra ihany koa no handray ny anjarany amin’io fotoanan’ny alarobia io, marihina fa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mivantana no ho avy eny an-toerana hizara izany fanampiana izany. Ireo fitaovan-tsekoly rehetra no ho azon’ireo mpianatra amin’io Alarobia io, ary izany dia manomboka amin’ny kitapo, ny penina, ny kahie, pensily hazo, gaoma sns rehefa mety fitaovana ampiasaina any an-tsekoly.
Fifanoloran-tanana sy fifampitsinjovana amin’ny maha mpiara-belona no anton’ny hetsika, ary ho fanamafisana hatrany ny maha zava-dehibe ny fidiran’ ny ankizy any an-tsekoly, amin’ny maha filoham-pirenena an’ i Hery Rajaonarimampianina dia adidiny ny mijery ny mpiray tanindrazana aminy, izay antony tsy nanadinoina ny ankizy mpianatra sy ireo Ray aman-dreny. Anisan’ny olana hatrizay ny fisian’ny fimenomenonana etsy sy eroa avy amin’ireo ray aman-drenin’ny mpinatra fa misy manodinkodina ny fitaovana izay hatolotra ho an’ ireo zanany, ary eo ihany koa indraindray ny mety ho fahatarana amin’ny fizarana, ka mahatonga ny ankizy mpianatra mbola tsy nahazo mangina mijery ireo namany efa misalotra sy mampiasa ireo fitaovana vaovao izay nomen’ny fitondram-panjakana ireo. Antony iray izany nanosika ny filoham-pirenena handray an-tanana ny fizarana, satria dia fihetsika iray hampazoto ny mpianatra amin’ny fiezahana sy fandrantoana fahalalana ny fahazoana fitaovana hitovian’ny rehetra, ka tsy nampikely soroka ny filoham-pirenena hanatanteraka ny hetsika.
Mandritra ny fizarana ny fitaovana dia efa misy ny fandaminana maro samihafa izay efa mandeha amin’izao fotoana izao, mba ahafahana manamora ny fizarana satria dia maro tokoa ny kilonga izay ho avy eny amin’ny coliseum. Noho izany eo ampiandrasana ny fizarana sy mandritra ny fizarana dia misy ny mpanakanto telo hiara-hisalahy amin’ny fanentanana, dia tsy iza izany fa ireo mpanakanto izay manana hira efa eny ambava’nny kilonga no nantsoina Mija, Arione Joy ary Stephanie. Mba tsy hisian’ny fibosesehana kosa dia amin’ny valo ora maraina, dia efa hisokatra ny vavahady, ary hisy ny toromarika maro isan-karazany izay tokony ho harahin’ny tsirairay, na io mpianatra, na io ihany koa ny ray aman-dreny, izay mety manaraka ny zanany eny an-toerana.